ISEMTHETHWENI INGCEBISO-INTANETHI JIKELELE IKLOKO
Ngomhla we-luhlomle kuwo ngokubanzi, kwaye lokuqala uqhagamshelane lawyer kunye umxhasi kwaye ingxaki yakhe. Ingcebiso unako wambi isigxina (intlanganiso kunye lawyer) kwaye ngokwembalelwano — nge-imeyili, efowunini. Nangona kunjalo, njengokuba umthetho, zonke iintlobo ngokwembalelwano luhlomle kuwo iingcaphephe ukuphumela ukuba yangaphakathi luhlomle kuwo le lawyer, njengoko i-imeyili okanye umnxeba i-lawyer ayisayi ixesha elide kwaye thoughtfully xoxa ingxaki Yakho, luhlole amaxwebhu Wakho.
Ifomati ye inombolo incoko okanye ngokwembalelwano ngu ezilungele kuphela kuba travelers: njengoko Yakho lawyer, kwaye lawyer kunye ingxaki Yakho. Efowunini i-lawyer, umzekelo, sifuna briefly impendulo — kutheni ukumelana ingxaki Yakho okanye hayi, kusenokuba uqikelelo»umlinganiselo ingxaki,»kwaye ilungelelanise ixesha nendawo Yakho kwintlanganiso kunye lawyer.
I-imeyili i-lawyer unako ukunika abanye ngakumbi oluneenkcukacha impendulo, njengoko rhoqo ingxaki kuhlangatyezwana, ngoko ke lawyer ayiyi kuphela unoxanduva, ukuba lowo ayikwazi kundinceda kulo mba, kodwa ngamanye amaxesha ucela clarifying imibuzo ngoko ke ukuba umxhasi kwaye lawyer ukuba ngokupheleleyo ukulungiselela i-luhlomle kuwo ngendlela personal ntlanganiso.
Lungisa ngoko nangoko ukuqinisekisa ukuba lawyer ngu engathndwayo ukuba abe ukulungele ukuya kuhlangana Nani»ilungelo ngoku», nangona le ndlela ayiyo ayifakwanga. Nangona kunjalo, a lawyer sele kwakucwangcisiwe umsebenzi wakhe ishedyuli kuba imihla ozayo, oko, kunjalo ungakhe fumana free»window»ukuze kuhlangana Nani. Intlanganiso lunokwenziwa njengoko kwi bar, kwaye ngexesha convenient ezimeleyo indawo (ezifana a café) nge-ukuqeshwa kunye a lawyer. Utyelelo a lawyer Yakho indawo yokuhlala ngu ayifakwanga ngokungqinelana iimfuno i-code of nobuntu a lawyer.